စံချိန်တင်မြင့်တက်နေသည့် ဒေါ်လာဈေးကြောင့် မြန်မာ့ရွှေဈေး တစ်ကျပ်သား ကျပ် ၉၅၆ဝဝဝ ထိရောက် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၆
စံချိန်တင် မြင့်တက်နေသည့် ကန်ဒေါ်လာ ဈေးကြောင့်မြန်မာ့ရွှေဈေးလည်း လိုက်ပါမြင့်တက်လာကြောင်း ရွှေလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းမှသိရသည်။ ယခုအခါ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးမှာ တစ်အောင်စလျှင် ကန်ဒေါ်လာ ၁၁၈ဝ ခန့်သာရှိသော်လည်း ပြည်တွင်း၌ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ဈေး နှုန်းမြင့်တက်နေမှုကြောင့် မြန်မာ့အခေါက် ရွှေဈေးမှာသြဂုတ် ၁၅ ရက်က တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၉၅ဝဝဝဝ ဖြစ်သော်လည်း သြဂုတ် ၁၆ တွင် ကျပ် ၉၅၆ဝဝဝ ဖြစ်ရာ တစ်ရက်အတွင်း ကျပ် ၆ဝဝဝ အထိ မြင့်တက်လာကြောင်း တိတ်စိန် ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးဇော်အောင်က သြဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
”မြန်မာ့ရွှေဈေးကကမ္ဘာ့ရွှေ ဈေးအတက်အကျနဲ့လည်း ဆိုင်သလို ပြည်တွင်းငွေလဲလှယ်နှုန်းထား တွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်တယ်။ ခုကမ္ဘာ့ရွှေဈေးကျနေပေမယ့် ဘာလို့ မြန်မာ့ရွှေဈေးတက်တာလဲဆို တော့ ပြည်တွင်းမှာဒေါ်လာ ဈေးတက်နေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ ရွှေဈေးက ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးတက်နေ ရင်လိုက်တက်တယ်။ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး ငြိမ်နေမယ်။ ပြည်တွင်းမှာဒေါ်လာ ဈေးလည်းငြိမ်နေတယ်ဆိုရင် မြန် မာ့ရွှေဈေးလည်း ကျမယ်။ ခုက ပြည်တွင်းမှာ ဒေါ်လာဈေးတက် နေလို့ မြန်မာ့ရွှေဈေးပါလိုက်တက် နေတာ ”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ယခုနှစ်ဧပြီလရက်က အမေ ရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၃၃၃ ကျပ်ဖြစ်နေရာမှသြဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် ကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် ကျပ် ၁၅၅ဝ ကျော်အထိ ဖြစ်ပေါ်လာ နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်လာဈေးကွက်မှ သိရသည်။
မြန်မာ့ရွှေဈေးမြင့်တက်ရခြင်းသည် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးမြင့်တက်ခြင်းနှင့် ပြည်တွင်းငွေလဲလှယ်နှုန်းအပေါ် မူတည်ကာအတက်အကျဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးမြင့်ရခြင်းသည် နိုင်ငံတကာအခြေအနေတင်းမာမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့်အတွက် ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဦးထုံရွှေဆိုင်မှ ပိုင်ရှင်ဦးကျော်ဝင်းက ပြောသည်။ ”ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးကကျနေတယ်။ ဆိုပေမယ့် လတ်တလောမှာ တူရကီရဲ့ ငွေကြေးပြသနာကြောင့်ပြန် တက်လာနေတယ်။ မြန်မာ့ရွှေဈေးက ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနဲ့ပြည်တွင်းဒေါ် လာဈေးအတက်အကျပေါ်မူတည် ပြီး ဈေးအတက်အကျဖြစ်တာ ကြောင့် ခုဒေါ်လာဈေးတက်တော့ မြန်မာ့ရွှေ့ဈေးလည်းလိုက်တက်နေတယ်။ အရောင်းအဝယ်ကတော့ အေးနေတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ရွှေဈေးမှာမြင့် တက်နေချိန်တွင် ရွှေအခေါက်အတုံးရောင်းချရမှုမှာပုံမှန်အရောင်း အဝယ်ရှိသော်လည်း အလျော့တွက် လက်ခရှိသည့် ၁၅ ပဲရည် ရွှေများမှာ အရောင်းအဝယ်အေး စက်လျက်ရှိကြောင်း ရွှေဈေးကွက်မှ သိရသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သမာဓိရွှေဆိုင်တွင် အခေါက်ရွှေလာလုပ်သည့် ဦးအောင်အောင်က ”၁၅ ပဲ ရည်ဆိုရင် ဒီဇိုင်းလေးတွေကလှ တယ်ဆိုပေမယ့် သူကအလျော့တွက် လက်ခရှိတယ်။ အခေါက်ရွှေက အလျော့တွက်လက်ခမရှိဘူး။ ပြန် ရောင်းရင် ရွှေဈေးအတက်အကျ ပေါ်မူတည်ပြီး ပဲအရှုံးအမြတ်ရှိမယ်”ဟု ပြောသည်။
သြဂုတ် ၁၆ ရက်က ရန်ကုန် မီးလင်း ရွှေတစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၉၅၆ဝဝဝ၊ ကမ္ဘာ့ရွှေတစ်အောင်စလျှင် ကန်ဒေါ်လာ ၁၁၇၆ ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလက ကမ္ဘာရွှေတစ်အောင်စလျှင် ကန် ဒေါ်လာ ၁၂၈ဝ အထိ မြင့်တက်ခဲ့ဖူးပြီး မြန်မာ့အခေါက်ရွှေဈေးတစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ်ကိုးသိန်း ခြောက်သောင်းဝန်းကျင်အထိ မြင့်တက်ခဲ့ဖူးသည်။
မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုးကျပြီး ထိုင်းဘတ်ငွေဈေး မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် မြဝတီကုန်သည်များ ထို
လမ်း၊ တံတား ဥပဒေပုဒ်မနှင့် ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေပုဒ်မတို့ဖြင့် တရားစွဲခံထားရသည့် အောင်သပြေကျေးရ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် စစ်ကိုင်းခရိုင်ပြည်သူများ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားစာ ၁၇ စောင်ရရှိ
မုံရွာမြို့နယ် ကျောက္ကာထန်း ဇလုတ် အပန်းဖြေစခန်း ချောင်းအတွင်း ရေနစ်ခဲ့သော လူငယ်နှစ်ဦး အလေ??
MWEA မှ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းကို အစိုးရ??